सजिलो पिकर उपकरणबाट सजिलो स्केचेस र रंग विचारहरूको साथ रेखाचित्र - Scantegrity
सजिलो पिकर उपकरणबाट सजिलो स्केचेस र रंग विचारहरूको साथ रेखाचित्र
कला बिना पृथ्वी एह!, र चित्रकला मेरो मनपर्ने कला को एक हो। तपाइँ सबैलाई थाहा छ कि र paint्ग गर्न सबैभन्दा गाह्रो भाग सुरू गर्नु हो। यस अवस्थामा, तपाइँले सुन्दर स्केचहरू वा चित्रकलाको सजिलो स्केचहरू फेला पार्न आवश्यक पर्दछ। ठिक छ, राम्रो छ यदि तपाईंले प्यारा चित्रहरूको समूहको खोजी गर्नुभयो जुन तपाईंको अर्को चित्रकलाको लागि राम्रो विचार हुन सक्छ। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, चित्रकला टेकनीको गुच्छा छ जुन तपाईं लागू गर्न सक्नुहुन्छ। उल्लेख गर्न को लागी, एक मोड को साथ चित्रकारी लागू गर्न राम्रो छ।
राम्रोसँग, यो लेखले तपाइँलाई टम्बलर रेखाचित्रको एक गुच्छा देखाउँदछ जुन सुन्दर रेखाचित्रदेखि लिएर साधारणहरू सम्म। अवश्य पनि, तपाइँ कुनै पनि रेखाचित्र आधार मा लागू गर्न सक्नुहुन्छ। वास्तवमा चित्रकारी भनेको फोटो खिच्नु जस्तै हो। ती दुबैको समान लक्ष्य छ कि छवि सिर्जना गर्न जुन कथा भन्न सक्षम छ। तपाईं क्यानभास एमट्यू वा कल्पना दृश्यमा पनि कथा सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ।
चित्रकारीको बारेमा तपाईंलाई के थाहा छ?
चित्रकला कलाको एक अंश हो। जब तपाईं चित्रको बारेमा सुन्नुहुन्छ, तपाईंले बुर्स, पेन्ट्स, प्यालेट चक्कु, स्पन्ज, र एयरब्रशको पनि सम्झनु पर्छ। अवश्य पनि, चित्रकला कार्यको परिणाम हो र चित्रकला एक वस्तु हो।
कुनै डाउट छैन, तपाइँ भन्न सक्नुहुनेछ कि चित्रकला एक कलाको रूपमा लिइन्छ किनकि यो यसको शैली वा प्राविधिक भन्दा यसको फर्मसँग सम्बन्धित छ। हो, भित्तिचित्र कला र तेल चित्रकला दुई प्रकारका चित्रकला हुन्। तपाईले देख्नुभयो, आर्साइलिक चित्रकला पेंटि technique टेक्निकको आधुनिक अनुहार हो। त्यसोभए, यदि तपाईं केहि आधुनिक बनाउन चाहानुहुन्छ भने, एक्रिलिक तेह्निक लागू गर्नको लागि उत्तम हो।
Pain२ चित्रकारी तेक्नीक प्रकारहरू के हुन्?
। एक्रिलिक चित्रकारी
एरियल हवाई परिप्रेक्ष्य
Ase Easel चित्रकारी
A Encaustic चित्रकारी
Res फ्रेस्को चित्रकारी
El प्यानल चित्रकारी
Le प्लेन-एयर चित्रकारी
Roll स्क्रोल चित्रकारी
Su Sotto In Su
र, चित्रकला को शैलीहरु के हो?
जानकारीको लागि, त्यहाँ दुई किसिमका चित्र शैलीहरू तपाईंले थाहा पाउनुपर्दछ। फर्ट एक पश्चिमी शैलीको छ र दोस्रो एक पूर्वी शैली हो। सबैको कल्पना, यहाँ चित्रकलामा पश्चिमी शैलीहरूको सूची छ:
लाक्षणिक अर्थ / आलंकारिक कला
आर्ट डेको – दृश्य कला, वास्तुकला र डिजाइन
कला नौव्यू – प्रकृतिबाट प्रेरित
यसै बीच, चित्रकलामा ईस्टर शैलीहरू:
भारतीय चित्रहरु: तन्जोर, मुगल, राजस्थानी र पट्टाचित्र
रंग प्रेरणा प्राप्त गर्न र Color्ग पिकर प्रयोग गर्नुहोस्
तपाईंमध्ये कति जना हुनुहुन्छ जुन तपाईंको चित्रहरूमा समान रंग प्रयोग गरेर बोर हुनुभयो? ठिक छ, तपाईंलाई थाहा हुन सक्छ कि र color्ग पिकरले तपाईंलाई १.8 मिलियन भन्दा बढी र ideas्गीन विचारहरू दिन सक्छ। मेरो मतलब, जब तपाईं एक तस्वीर देख्नुहुन्छ, तपाईं एक रंग पाउन सक्नुहुनेछ जुन तपाईं आफ्नो पेन्टिंगमा लागू गर्न चाहानुहुन्छ। तर, के हुन्छ यदि तपाईं प्रयोग गर्न चाहानु भएको रंगको नाम दिन सक्नुहुन्न भने? तपाईं अलमल्लमा पर्नुहुनेछ!
राम्रोसँग, यदि तपाइँ र color्ग पिकर प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ चित्र, छवि, वा फोटो भित्र रंग संयोजन को सूची थाहा छ। जानकारीको लागि, उपकरण प्रयोग गर्न सजिलो छ र यो एक मिनेट को लागी खर्च गर्दछ। तपाईंले भर्खरै छवि तयार गर्नुपर्नेछ जुन तपाईं रंगको विश्लेषण गर्न चाहनुहुन्छ र तपाईं छविको विवरणहरू फेला पार्नुहुनेछ। तपाईंले फेला पार्न सक्नुहुने केही जानकारीहरू रंगको नाम हो, RGB, र HEX साथै। कस्तो राम्रो उपकरण, हैन त?
र Color्ग पिकर कसरी प्रयोग गर्ने?
यस्तो देखिन्छ कि तपाईं र pick्ग पिकर प्रयोग गर्न कुर्नुहुन्न। त्यसो भए, कुनै पनी बाँकी बिना, तपाई र color्ग पिकर प्रयोग गर्न क्रमबद्ध चरणहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईं जानुहोस्!
चरण १: तपाईंको उपकरणमा छवि, चित्र, वा फोटो प्राप्त गर्नुहोस्
सर्वप्रथम सर्वप्रथम, तपाईंले छवि, चित्र, वा तपाईंले आफ्नो उपकरणमा फोटोको रूपमा कल गर्नु पर्छ। अवश्य पनि, तपाईं यसलाई इन्टरनेटबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाई निश्चित स्रोतमा स्क्रिनसट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईंसँग क्यामेरा छ, तपाईं सिधा वस्तुको तस्वीर लिन सक्नुहुनेछ।
चरण २: रंग पिकर उपकरणमा छवि, चित्र, वा फोटो अपलोड गर्नुहोस्
यदि तपाईं देख्नुहुन्छ भने, निम्न उपकरणले तपाईंलाई तस्वीर अपलोड गर्न खाली ठाउँ प्रदान गर्दछ। ठीक छ, तपाईं सहि चित्र, छवि, वा फोटो छान्नु पर्छ।
चरण:: चित्रको केही विवरण राख्नुहोस्
तस्विर अपलोड गरेपछि तपाईले केहि वर्णन थप्नु पर्छ। राम्रोसँग, तपाईले फिल्ड पूरा गर्न चार शब्दहरू प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ।
चरण:: “बुझाउनुहोस्” बटन क्लिक गर्नुहोस्
र, तपाइँ अर्को चरणमा जारी राख्न सबमिट बटनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ।
चरण:: रंग खोजकको नतीजा अन्वेषण गर्नुहोस्
अन्तमा! तपाईंले तस्वीर सबमिट गर्नुभयो। अब, स्क्रीनमा केहि रंग देखा पर्नेछ। अवश्य पनि, तपाइँ केहि विवरणहरू जस्तै HEX, RGB, र रंगहरूको नाम हेर्न सक्षम हुनुहुनेछ। तपाईं नयाँ रंगहरू फेला पार्न विभिन्न चित्रहरू, छविहरू, वा फोटोग्राफहरू प्रयोग गरेर चरणहरू दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ। रमाइलो गर!
तपाईं देख्नुहुन्छ, तपाईंले अपलोड गर्नुभएको तस्वीरमा विभिन्न रंगहरू छन्।
अब, तपाइँ तपाइँको चित्रकला विचारहरु को लागी ती रंगहरु लागू गर्न सक्नुहुन्छ।